Hydro-static katapila SD7K - China Xuanhua Construction Machinery
Nkịtị Structure katapila
Elu-na-akwọ ụgbọala katapila
Imefusị landfill katapila
Oke ohia katapila
The ụlọ ọrụ igodo
Akụkụ ahụ mapụtara support
Nkịtị Structure katapila TY230-3
Imefusị landfill katapila TYS165-3HW
Elu-na-akwọ ụgbọala katapila SD7N
Hydro-static katapila SD7K
Ọkara isiike kwụsịtụrụ, elu sprocket, na EBIONITISM Ⅲ electronic engine, hydrostatic na nọgidere agbanwe nnyefe, zuru ike kenha, akpaka akara onwe ha jụrụ usoro. Electronic achịkwa engine na zuru ike kenha ụkpụrụ, ala mmetọ na ume na-azọpụta; na SD7K katapila na-ike na modular imewe, mfe ịrụzi na mmezi; mmekọrịta ngwá ngosi, n'ụzọ zuru ezu-akàrà ntụ oyi tagzi. Ọ nwere ike na-onwem na ogologo tilting agụba, n'akuku ...
Port: Xingang, Shanghai, ọ bụla ọdụ ụgbọ mmiri nke China
Ọkara isiike kwụsịtụrụ, elu sprocket, na EBIONITISM Ⅲ electronic engine, hydrostatic na nọgidere v ariable t ransmission , zuru ike kenha, akpaka akara onwe ha jụrụ usoro. Electronic achịkwa engine na zuru ike kenha ụkpụrụ, ala mmetọ na ume na-azọpụta; na SD7K katapila na-ike na modular imewe, mfe ịrụzi na mmezi; mmekọrịta ngwá ngosi, n'ụzọ zuru ezu-akàrà ntụ oyi tagzi.
Ọ nwere ike na-onwem na ogologo tilting agụba, n'akuku agụba, coal ịkwa agụba, U udi agụba; otu shank Ripper, atọ ụkwụ Ripper; ROPS, FOPS, oké ọhịa na-azara ọnụ ụlọ etc .. Ọ bụ ike ezigbo igwe eji nkwurịta okwu, mmanụ ubi, ike, na Ngwuputa wdg nnukwu ụwa na-akpụ akpụ ihe omume.
(bụghị tinyere Ripper) Operation ibu ( n'arọ) 25500
Ground nsogbu (K Pa ) 77.9
Track nlele (mm) 1980
Grajentị 30 Celsius / 25 °
Min. ala nwechapụ (mm) 394
Ụra iburu gị ike ( m ³) 8.1
Agụba obosara (mm) 3500
Max. egwu ala omimi (mm) 498
N'ozuzu akụkụ ( mm ) 5876× 3500× 3 402
Pịnye WeiChai WP12G250E302
Gosiri mgbanwe (rpm) 2100
Flywheel ike ( K W / HP ) 185/252
Max. torque (N • m / rpm) 1200 / 750-1400
Gosiri mmanụ ụgbọala oriri (g / KW • h) 182-202
Pịnye The track bụ triangle udi.
T ọ sprocket bụ elu.
N umber nke track rollers (n'akụkụ nke ọ bụla) 7
P oko (mm) 216
W idth nke akpụkpọ ụkwụ (mm) 560
Forward (Km / h) 0-1 0,5
Azụ (Km / h) 0-1 0,5
Max. usoro mgbali (MPa) 20
Mgbapụta ụdị High perssure Kwadobe imipu
System mmepụta ( L / min ) 180
Pilot haịdrọlik akara
na-akwọ ụgbọala usoro
Dual-na sekit na sekit kọmputa akara hydrostatic usoro
Modularize atọ-nkebi mbara ọsọ Mbelata ikpeazụ mbanye
Palm Tụziere-Electric joystick
Ọgụgụ isi ọrụ usoro
Previous: Hydro-static katapila SD5K
Next: Assaster katapila SD7
Hydraulic crawler katapila
Hydraulic crawler katapila N'ihi Construction
Hydraulic crawler Apiti katapila
Coaling katapila SD7
Multi-ọrụ katapila SD7LGP
Mining katapila SD8N
Oke ohia katapila T165-3
Nkịtị Structure katapila SD6N